Date My Pet » Top 4 Soso-kevitra Tokony ho Fantatrao Momba ny Dating
Izahay awash amin'ny toro-hevitra na aiza na aiza no mampiaraka mijery. Ao anatin'ny tontolo feno olona miezaka ny mahita ny olona rehetra Toa te hanana ny lazao hoe. Ary matetika izy ireo hanao izany feo izany, raha ny marina mora dia tsy mora mihitsy ny. Raha izany ary no nihazona izany andraikitra izany efa nihaona rehetra ny lehilahy na vehivavy ny nofy rehefa rehetra. Izany aho hoe tsy ho zavatra toy ny “Fotsiny ianao mba hahazo ny na inona na inona no misakana anao, ka mandehana ho azy.” satria raha toa ka afaka manao izany isika rehetra dia tsy mila mamaky mampiaraka toro-hevitra. Noho izany dia tsy milaza ny tenany ho manam-pahaizana manokana. Inona no azoko atao filazana dia ny ho afaka hahatakatra. Isika rehetra miara ity.
Ity angamba no zava-dehibe indrindra ny mahatsiaro fa rehefa tonga any amin'ny mampiaraka lalao. Fa izany koa angamba no sarotra atao, fampiharana. Ary Mihevitra aho fa efa saika mbola meloka ny manao ny fomba mieritreritra ny olona tiantsika Tian'i mba hampiaiky volana azy ireo. Fa ianao tsy handeha fotsiny hahitana ny tena fitiavana izany. Ny tena fitiavana dia fifandraisana. Izany no olona iray mahita anao ho marina hoe iza ianao ary adoring anao noho izany. Mantsy ianao no handeha amin'ny alalan'ny fiainana manontolo hanao zavatra? Fa tonga izany andraikitra. Kosa dia tsy maintsy ho fanajana ny hoe iza izy ireo. Noho izany ohatra mety ho sarotra rocker fa tahaka ny cheesiest ny cheesiest amin'ny Pop. Tokony hanaja azy ireo toy ny tianao izy ireo mba hanaja anao. Aza mitady hanova ny tsirairay. Efa reko izany amin'ny olona ao maharitra fifandraisana. Izany no zavatra ratsy atao. Izany ihany no mitarika ho amin'ny lolom-po sy mangidy.
Zava-drehetra ny Little sarobidy
Ianao dia tsy maintsy hitsara ny fomba hilalao izany amin'ny iza ilay olona dia satria misy tena manao fihetsika toy ny lehibe sy ny ho wined sy nisakafo! Fa fahadisoan-kevitra ny mahazatra dia ny olona rehetra no toy izany, rehefa maro no kokoa ny andinin-teny fotsiny ny manontany ny andro. Efa nandre olona nilaza fa talohan'ny ary mora manaiky izany. Ny tena zava-dehibe raha toa ka ianao no hahazo ny fanomezana azy ireo fa tokony ho fantatra izay tiany. Mampiseho miahy azy, ary iza izy ireo. Ny levitra fanomezana toy ny voninkazo, sôkôlà sy aftershave / ditin-kazo manitra dia tsara tamin'ny voalohany, fa toy ny fifandraisana mandroso mampifanaraka ny fanomezam-pahasoavana mba ho kely kokoa ny olona ho any amin'ny olona miaraka aminao.
Eny, izany dia sarotra iray, raha saro-kenatra ianao manana toetra. Tsy hoe ambany fa saro-kenatra ivelany tsy misy harena ny hevitra mitsahatra (Izany no mahatonga ny ankamaroantsika ho tonga mpanoratra!) saingy tsy mora foana ny hanana toky mba hanehoana azy ireo ary afaka mahazo an-dalana anao hahita fitiavana mampalahelo satria ny olona iray dia tsy maintsy hahafantatra anao. Izay no manapa-kevitra na tahaka anao, na tsy manaraka ny voalohany manintona. Mazava ho azy fa eo amin'ny fiainana tahaka, ny fitiavana dia tsy miova, ary ianareo dia mila mampiasa ny fahaiza sy ny toro-hevitra ny hafa mba hahafantatra izay toe-javatra tokony milaza ny hevitra ao ary rehefa izany dia tsara indrindra ny mangina fa ny azo atao ny mamela azy ireo fantatro hoe iza ianao. Afaka Mbola ho saro-kenatra. Mety ho mahasarika. Fa manandrana ny hisokatra koa. Sy ny fomba hanampiana amin'ny izany dia ny hanao Mazava ho azy fa eo amin'ny fifandraisana (na vitsivitsy!), manao hariva taranja, handeha any amin'ny toastmasters na mahazo ny tenanao fotsiny avy teo amin'ny rivo-piainana ara-tsosialy betsaka araka izay azo atao. Tena mampahatahotra fa ilaina na tsia izany. Toy ny hoe foana ny Neny, tsy tokony hijanona ny ainy ho an'ny hafa.
Haka ny Olona Fa Ianao
Ny tena zavatra mahazatra ny olona manao izany izy ireo dia naka olona avy amin'ny fianakaviana na ny namana izay mihevitra. Eny toro-hevitra nihaino izay toro-hevitra dia hendry toy ny raha s / izy mpidoroka zava-mahadomelina ihany angamba ny olona mitady ho anareo. Fa ny olona dia manana fironana ny fametrahana ny karazana toy ny karazana rehetra sy ny karazana olona izahay fa dia tsy manam-paharoa ho antsika. Raha mitady ny hippy na beatnik ianao handeha tsy ho faly amin'ny firenena tantsaha sy ny mifamadika amin'izany. Marina aloha fa misy maningana noho ny an'izao tontolo izao ny mampiaraka dia ampoizina mihitsy fa amin'ny ankapobeny isika hitady olona rehetra izay mifanaraka amin'ny antsika sy ilaintsika ho amin'ny olona hoe iza isika ary mahazo aina amin'ny excites antsika. Tena tsy misy tsara amin'ny olona, ​​satria efa manana ny olon-tianao’ tombo-kase ny fankatoavana. Tsy izy ireo no niaraka azy ireo. Ianao. Ary tsy hilaza azy ireo izay tokony hanao izany dia tsy afaka handray fanapahan-kevitra ho anareo. Ary matoky ny tenanao fanapahan-kevitra ary ny sainao. Ny ny instincts amin'ny fitiavana mazàna no tsara fanahy.
Tiavo ny alika
Dimy Soso-kevitra amin'ny fomba hanatonana A Jamba Date